POLITIKA MALOTO : Niniana natotongana ny vidin’ny lavanila hanaratsiana endrika ny Mpitondra
Nohamafisin’ny Filoha fa mila mifampitsinjo ny samy Malagasy. “Izahay Mpitondra Fanjakana tsy te ho tonga tamin’ny andron’ny Praiminisitra Razanamasy hividy ny lavanila rehetra. Tsy te hanao ny asan’ny mpandraharaha izahay. 10 novembre 2021
Atao malalaka ilay izy fa mba misy fetrany kosa hoe : hatreto ka hatreto rehefa misy tombony. Tsy maintsy hisy fiovana io amin’ny taona ho avy. Raha ny eritreritro dia 100 000 Ariary/kg no tokony hamarotan’ny tantsaha ny lavanila maitso amin’ny herintaona. Vita izany raha atao. Azo atao ny asamarika. Misy paikady azo anaovana izany saingy tsy mbola havoakako eto izany", hoy hatrany ny Filoha. Marihina fa amin’ny filana lavanila izay mananika hatrany amin’ny 3 000 taonina maneran-tany isan-taona eo anivon’ny tsena iraisam-pirenena dia 2 370 taonina no aondrantsika. I Madagasikara izany no manana ny kalitao tsara indrindra maneran-tany no sady Firenena lohany manana izany.
Toromarika ho an’ny solontenam-panjakana
Hiaro an’ity seha-pihariana ity ny Fanjakana manomboka any amin’ny mpamboly ka hatrany amin’ny mpanondrana. Nanome toromarika ho an’ny governora ny tenany hanamboatra ny lalana rehetra ahafahana mamoaka ny vokatry ny tantsaha. Notsipihiny fa “raha tsy ampy ireo milina fanaovan-dalana na “Engins” ireo dia mbola afaka manome ny Fanjakana.” Hanao fampiasam-bola manokana momba ny fampitaovana sy ny olona ny Fanjakana mba tsy ho betsaka intsony ny lavanila halatra. Fantatra fa 37 taonina amin’ny 2 300 taonina aondrana no very. Efa mahatratra 10% izany lavanila halatra misy manondrana izany. “Tsy maintsy aminareo mpandraharaha mpanondrana ireo ihany anefa no manondrana izany. Tena potika ny tantsaha. Noho izany mila jerena tsara izany. Any amin’ny tantsaha matetika no hisian’ny fangalarana lavanila. Izy mbola eny am-potony. Izany hoe : tsy tena 10 taonina izany fa latsaka kely satria lavanila maitso mbola tsy voakarakara", hoy ny Filoha.
Fehin-kevitra miisa fito no napetraky ny Fanjakana hamahana ity olan’ny lavanila miverimberina ity : Ao anatin’izany ny fametrahana Borigadin’ny mpitandro filaminana manokana momba ny lavanila. Araka ny kabary nataony, ny Fanjakana no hamatsy ny fitaovana rehetra ampiasain’io vondrona mpitandro filaminana manokana io. Moto sy fiarakodia no hatolotra ary hisy fiara tsy mataho-dalana koa. Nivohitra tao amin’ny fehin-kevitra koa fa hosaziana araka ny lalàna ireo mpividy lavanila halatra, izay antony mampitotongana ity vokatra ity amin’ny fotoam-piakarany. Niantso ny tompon’andraikitra isan’ambaratongany handray izay tandrify azy ny Filoha, Andry Rajoelina. Nohamafisiny fa samy voafaoka ao anatin’ity olana nampitotongana ny lavanila ity hatramin’ny “Fitsarana, ny mpanao famotorana, ny mpividy…” any amin’ireo mantsy no miainga ny lavanila. Fehin-kevitra nisongadina tamin’io koa ny fanatanterahana fivoriana iraisan’ny mpisehatra rehetra anjara mialoha ny fotoam-piotazana lavanila. Mandritra io fivoriana io izany no hanapahana ny zava-drehetra. Hirosoana manomboka izao koa ny fametrahana dizitalizasiona amin’ny karatra ho an’ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny lavanila. Izany no natao dia hialana amin’ireo mpisandoka. “Tokony hanana karatra avokoa izany ny mpisehatra rehetra miantomboka amin’ny mpamboly, mpanangom-bokatra, mpanondrana”, araka ny fanazavana. Fehin-kevitra fahadimy ny fampiasana fitomboky (poinçon) atao mariky ny lavanila. “Misy ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana hamatsy ireo fitomboka ireo. Tsy misy fakana tombony”, hoy ny lahatenin’ny Filoha.
Vidin’ny lavanila mangarahara
Tsy maintsy hatao petadrindrina manoloana ny toerana fividianana ny lavanila koa ny vidy hividianan’ny mpandraharaha ny lavanila. Misy ny mpandraharaha mividy an-tsokosoko amin’ny vidiny ambany dia ambany. Misy ny tsena tokony hivarotana ny lavanila ary atao fantatry ny mpisehatra rehetra izany. Hapetraka koa ny "Prix de référence" avy amin’ny Fanjakana izay hamaritra ny mety ho vidin’ny lavanila. “Natao io mba tsy ho lasa varoboba ny lavanila malagasy. Napetraka ny "prix de référence" ho 75 000 Ariary /kg ny vidiny farany ambany hividianana ny lavanila maitso eny amin’ny tantsaha. Napetraka koa ny "prix de référence" : 250 Dolara hivarotan’ny mpanondrana ny lavanila efa voaomana (vanille préparée) eny anivon’ny tsena iraisam-pirenena, araka ny tapaka tao anaty fehin-kevitra hatrany. Nomena tombony nandritra ity fihaonana ity ny mpamboly lavanila. Nakarina ambony ny vinavinam-bidy ho an’ny lavanila, ka tsy natao latsaky ny 75 000 Ariary /kg intsony. Raha ity farany mantsy no sanda fakan-tahaka napetraky ny Fanjakana hividianana ny lavanila maitso na manta eny amin’ny tantsaha dia zara raha 20 000 Ariary na 30 000 Ariary / kg izany tamin’ity taom-piotazana ity. Samy nomen’ny Filoham-pirenena baiko hijery akaiky ity olana ity avokoa ny tompon’andraikitra any amin’ireo Faritra mpamokatra lavanila. Hatrany amin’ny Governora izany ary miafara any amin’ny sefo fokontany. Hisy Didim-panjakana (décret) horaisin’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana mikasika ny "affichage de prix de la vanille" hividianan’ny mpanondrana ny lavanila maitso na manta.